China Ems sculpt Isi Contouring muscle ike ahu Slimming Machine factory na-emepụta |KEYLASER
Ems kpụrụ aru Contouring muscle siri ike slimming Machine
Epinephrine ewepụtara na-egosi mkpụrụ ndụ abụba ka ha malite lipolysis.A na-ekewa abụba echekwara n'ụdị triglycerides n'ime acid fatty free (FFAs) na glycerol nke a na-eji dị ka ike ike. Mgbakwụnye supramaximal siri ike na-akwalite mwepụta nke epinephrine nke na-ebute mmetụta cascade na-eduga na lipolysis supramaximal na sel abụba. Nzaghachi nke lipolytic karịrị akarị, FFA na-amalite ịgbakọta na adipocytes. Ihe njupụta nke FFA na-akpata dysfunction cell na ntinye nke apoptosis-programmed cell ọnwụ.
EMSCULPT na-eji teknụzụ Electro-Magnetic (HIFEM) lekwasịrị anya nke ukwuu.Ọ bụ naanị usoro nke ụwa na-eleba anya n'otu oge ma akwara na abụba.
Theory arụ ọrụ
EMSCULPT na HIFEM Technology na-eme ka ọkpụkpụ anụ ahụ dị elu nke na-eme ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ime site n'omume afọ ofufo. Mgbe a na-ekpughe ya na nkwekọrịta dị elu, a na-amanye tissus muscle ime mgbanwe na ọnọdụ dị otú ahụ dị oke egwu. The musle na-azaghachi na nhazi miri emi nke nhazi ime ya, uto nke myofibrils (anụ ahụ). hypertrophy) .Usoro a na-ebute mmụba nke anụ ahụ na oke olu.Rute fatremoval and muscle building.
Aka abụọ maka azụ,Afọ,Ụkwụ,Ogwe aka,Hips slimming na akwara ọkpụkpụ
Interface ọrụ 12 LCD Touch Agba ihuenyo
Ọrụ Isi Slimming & Akpụkpọ anụ ahụ
Jikwaa 2 Aka
Ozizi Electromagnetic Pulses
Ugboro ugboro 100HZ
Ike ike 0-7 Tesla
Mpaghara ọgwụgwọ Azu,Abdomen, ụkwụ, ogwe aka, hips
Nke gara aga: Cryolipolysis ahụ slimming Fat Freezing Machine na-arụ ọrụ aka anọ n'otu oge
Osote: Kacha ọhụrụ Lipozero multipolar rf vacunm Body Slimming igwe